El Salvador waxay qaadataa Seeraar oo ah lacagteeda sharciga ah, shilalka Bitcoin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » El Salvador Breaking News » El Salvador waxay qaadataa Seeraar oo ah lacagteeda sharciga ah, shilalka Bitcoin
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • El Salvador Breaking News • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dowladda El Salvador waxaa lagu qasbay inay jeebka cusub ee dijitaalka ah ee Chivo ka qaadato khadka tooska ah iyada oo si qallafsan u baratay si kor loogu qaado awoodda adeegga.
Korsashada kripto-ka rasmiga ah ee ugu horreysa adduunka ayaa bilawday dhagaxtuur.
Dawladda El Salvador waxay qaadatay jeebka dhijitaalka ah ee waddanka si toos ah si kor loogu qaado awoodda adeegga.
Bitcoin ayaa hoos u dhacda kadib markii El Salvador ay si rasmi ah u aqbashay lacag sharci ah.
Qiimaha hantida kowaad ee dhijitaalka ah, bitcoin, ayaa hoos ugu dhacay ilaa 16% ilaa $ 43,100 kadib markii uu jabiyay $ 52,000 goor dambe oo Isniintii ah.
Madaxweynaha El Salvador Nayib Bukele
Bitcoin ayaa hoos u dhacday ka dib markii dowladda El Salvador ay si rasmi ah u aqbashay inay tahay lacagta sharciga ah ee dalka. Ku-meel-gaadhka rasmiga ah ee adduunka ugu horreeya ee kripto-ga waxaa ku mudaaharaaday mudaaharaadyo ballaaran oo ka dhacay waddooyinka waxaana lagu dilay cilado farsamo oo onlayn ah.
Seeraar shilka ayaa loo aaneeyay dhibaato farsamo oo ku qasabtay dowladda El Salvador in ay jeebka cusub ee dijitaalka ah ee Chivo ka qaadato khadka tooska ah iyada oo si xarago leh u xanniban si kor loogu qaado awoodda adeegaha.
“Waxaan xariga ka jarnay annaga oo kordhinayna awoodda server -ka qabashada sawirrada. Dhibaatooyinka rakibidda ee dadka qaar ay haysteen waa sababtaas awgeed, ”ayuu madaxweyne Nayib Bukele ku soo qoray bartiisa Twitter -ka, isagoo faallo ka bixiyay dib -u -dhaca.
Cryptocurrency wuxuu ku guuleystey inuu dib u soo laabto tan iyo markaas, wuxuuna ugu dambeeyay hoos uga dhacay 13% inuu ku ganacsado $ 45,512.
Dhanka kale, koox dibadbaxayaal ah oo ka soo horjeeda sharciga cusub ee bitcoin ayaa isugu soo baxay waddooyinka caasimadda San Salvador. Hawl -wadeennada ayaa la sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabadaas sababtuna waa aqoon -darro ku saabsan cryptocurrency iyo sida sharciga cusub ee bitcoin loo dhaqan -gelin doono.
El Salvador waxay la yaabtay adduunka iyo adduunka ballaadhan horaantii sannadkan ka dib markii Madaxweyne Bukele uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku qaadanayo Seeraar ahaan hindise sharciyeed oo barbar socda Doolarka Mareykanka, kaas oo dalka laga isticmaalayay tan iyo 2001dii.